my kitchen my life: ကျွန်တော်သိသော ဟင်းပွဲများ ၄
ကျွန်တော်သိသော ဟင်းပွဲများ ၄
AGNELLO ALLA BRACCONIERA
Grilled lamb chops served with bacon and brown mushroom sauce.
For garnish > mash potato , boiled carrot dices, broccoli , zucchini , finely chopped parsley.
အန်ဂျယ်လိုး လို့ခေါ်ပါတယ်။ agnello ဆိုတာက italian လိုခေါ်တာပါ။ lamb ပေါ့။ lamb chop ကို grill ထားတာပါ။
brown mushroom sauce ကလွယ်ပါတယ်။ mushroom ကို sauteed လုပ်၊ ပြီးရင် brown sauce ထည့်ရုံပဲ။
mikozan October 24, 2009 at 8:10 PM
သူ့သိုး နံရိုးကလဲ သွားကြားထိုးတံလောက်ရှိတယ်
leo October 25, 2009 at 4:43 PM
အင်း... တော်တော် အစားကြီးတာပဲ...း)
နည်းနည်း ဈေးကြီးတယ် လို့ပြောရမယ်။
78 Dhs ပဲ ရှိတယ်ဗျ။
1 dollar = 3.56 Dhs